စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page5of 30 | Frontier Myanmar
အောင်ဆန်းကွင်းအား တစ်နှစ် ကျပ် သိန်း ၅၀ ဖြင့် ငှားရမ်းထား
ရန်ကုန်မြို့က အောင်ဆန်းကွင်း၊ ပုဒုမ္မာကွင်းနဲ့ စလင်းကွင်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံ နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းထားပြီး တစ်နှစ်ငှားရမ်းခက ကျပ်သိန်း ၅၀ နဲ့ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောပါတယ်။ အောင်ဆန်းကွင်းနှင့် ပဒုမ္မကွင်း ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း ၅၀.
တရုတ်မှ Little Sheep ဟော့ပေါ့ဆိုင်ခွဲ ရန်ကုန်မှာ ဖွင့်တော့မည်
နိုင်ငံတကာမှာ ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Little Sheep ဟော့ပေါ့ဆိုင်ခွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှန်ဟိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ တိုကျို၊ နယူးယော့ခ်၊ တိုရွန်တို၊ မဲလ်ဘုန်းနှင့် အူလန်ဘာတာတို့မှာ ဆိုင်ခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Little Sheep ဟော့ပေါ့ကို.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော Mercure အမှတ်တံဆိပ် ဟိုတယ် ဖွင့်လှစ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော Mercure အမှတ်တံဆိပ် ဟိုတယ်ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်တွင် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဟု AccorHotels အုပ်စုက ကြေညာလိုက်သည်။ အခန်းပေါင်း ၁၈၃ ခန်း ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဆိုပါဟိုတယ်၏ အခန်းတွင်း အပြင်အဆင်များသည် မြန်မာယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ၊ လက်မှုပညာနှင့် ရိုးရာယွန်းထည်ပစ္စည်းများ၏ အနှစ်သာရကို မှီငြမ်းထားသည်ဟု.
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ခန့်က မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည့် မင်္ဂလာဈေးအား လပေါင်း ၃၀ အတွင်း အပြီး တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကာ စံနမူနာပြဈေးတစ်ခု ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားသည်။ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၄,၀၇၉ ခန်းရှိသည့် မင်္ဂလာဈေးသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ပထမအကြိမ် မီးလောင်ခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်.